ချန်ပီယံလိဂ်ကို ပိုအလေးထားမည် ဆိုခြင်းကို ဗဲလ်ဗာဒီ ငြင်းဆန်၊ ပေါ့ဘာနှင့် သတင်းများ ထွက်နေ? - Yangon Media Group
ချန်ပီယံလိဂ်ကို ပိုအလေးထားမည် ဆိုခြင်းကို ဗဲလ်ဗာဒီ ငြင်းဆန်၊ ပေါ့ဘာနှင့် သတင်းများ ထွက်နေ?
ဘာစီလိုနာနည်းပြဗဲလ်ဗာဒီက အသင်း အနေဖြင့် နောက်ဆုံး ၁ဝ နှစ်အတွင်း လာလီဂါ တွင်ပိုမိုအောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီးနောက် ယခုနှစ် တွင် ချန်ပီယံလိဂ်တွင်ဗိုလ်စွဲရန် ပိုမိုအလေးထားမည် ဟူသောမှန်းဆချက်များမှာ မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဘာစီလိုနာသည် လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ် တစ်ခုအတွင်း လာလီဂါဆုဖလားကို ခုနစ်ကြိမ် တိုင်ရယူနိုင်ခဲ့သော်လည်း ချန်ပီယံလိဂ်တွင်မူ နောက်ဆုံးခုနစ်နှစ်အတွင်း တစ်ကြိမ်သာဗိုလ်စွဲထားခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခုနှစ်တွင်ချန်ပီယံလိဂ်ကို ပိုမိုအလေးထားလာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းနေကြ သည်။ ဘာစီလိုနာသည် ယမန်နှစ်ရာသီကလာ လီဂါနှင့် စပိန်ဘုရင့်ဖလားများကိုရယူနိုင်ခဲ့သော်လည်း ချန်ပီယံလိဂ်တွင် ရိုးမားကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်း ကြောင့် ကွာတားအဆင့်နှင့်သာကျေနပ်ခဲ့ရချိန် တွင် ပြိုင်ဘက်ရီးရဲလ်မှာမူ ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလား ကို သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
ဗဲလ်ဗာဒီက ”အသင်းအနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲတိုင်းကို အလေးထားကစားဦးမှာဖြစ်သလို ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း အရင်အတိုင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားဦးမှာပါ။ ဘာစီလိုနာလိုအသင်းမျိုးအတွက် လာလီဂါရော၊ ချန်ပီယံလိဂ်မှာပါတူညီတဲ့အား ထုတ်မှုအတိုင်း ဆက်ရှိနေမှာပါ”ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဗဲလ်ဗာဒီက နွေရာသီအပြောင်း အရွှေ့ဈေးကွက်မှာ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်တွင်မှ ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ကစားသမားသစ် များထပ်မံခေါ်ယူခြင်းရှိ၊ မရှိကို သေချာမသိ သော်လည်း မိမိအနေဖြင့် လက်ရှိအသင်း၏ လူအင်အားကို ကျေနပ်အားရနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဘာစီလိုနာသည် နွေဈေးကွက်အတွင်း မယ်လ်ကွန်၊ အာသာ၊ ဗီဒဲလ် စသည့်ကစားသမား သစ်များကို ခေါ်ယူအားဖြည့်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း မန်ယူတွင်မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေသော ပေါ့ဘာကိုခေါ်ယူရန် ကြိုးစားနေဆဲဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။ သို့ရာတွင် ဗဲလ်ဗာဒီက ”တခြားအသင်းက ကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာဆွေးနွေးမှုမှ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ အသင်းကကစားသမား တွေကိုရော၊ တခြားအသင်းက ကစားသမား တွေကိုပါ လေးစားမှုထားရမှာပါ။ ဈေးကွက်က သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်အထိဖွင့်နေဦးမှာဖြစ်လို့ လက်ရှိလူစာရင်းက အပြီးသတ်ဖြစ်ပြီးလားဆို တာ သေချာမပြောနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အရင်လူစာရင်းနဲ့ အခုလူစာရင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့် ရင်တော့ လက်ရှိမှာ ထူးခြားတဲ့ကစားသမားတွေ ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် လူစာရင်းကိုရထားပြီလို့ထင်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။